पोरखे कालाजग्रा भिजिटमा कती जना पुगे, तथ्याड्ढ कहाँ छ ? - बडिमालिका खबर
पोरखे कालाजग्रा भिजिटमा कती जना पुगे, तथ्याड्ढ कहाँ छ ?
बाजुरा ४ माघ — नेपाल भम्रण बर्षको सुरुवाती संगै पोरखे लेखको भम्रण गर्ने आन्तरिक पर्यटकको निकै ठुलो उपस्थिती रहेको छ । हिउँदका सिजन भएकोले हिउँ खेल्ने रहरले पनी अन्य समयको भन्दा सनिबार बढि नै आन्तरिक पर्यटकको पोरखे कालाजग्रा भम्रणको पहिलो रोजाईमा पर्ने गरेको छ ।
आन्तरिक पर्यटक कती जना त्यहाँ पुगे भन्ने तथ्याड्ढ कसैसंग नरहेको पाईएको छ । बडिमालिका नगरपालिका र बुढिनन्दा नगरपालिकाको सिमा क्षेत्रमा पर्ने पोरखे लेक बिबाद भएर होला कसैले पनी यसको तथ्याड्ढ राख्न नसकेको स्थानीयले बताए । बडिमालिका नगरपालिका वडा न ७ ढम्कनेका होटल ब्यबासायीका अनुसार दिनमा १५ देखी २० जना र शनिबारको दिन २० जना भन्दा बढि आन्तरिक पर्यटक पोरखे कालाजग्रा फेदीमा जाने गरेको बताउनछन् ।
तर स्थानीय तहहरुले भने आधिकारीक तथ्याड्ढ संकलन नगरेको बताउछन बडिमालिका नगरपालिका वडा न ७ का वडा अध्ययक्ष धर्मराज पाध्यायले बताए । हिउँ खेल्नाकै लागि पोरखे जाने आन्तरिक पर्यटकहरु कोल्टी क्षेत्र भन्दा बढि मार्तडी क्षेत्रबाट जाने गरेको कालाजग्रा पर्यटन तथा संरक्षण समितिका अध्यक्ष लोकेन्द्र रोकायाले बताए । बर्षाको समय भन्दा हिउँ परेको बेला रमाईलो गर्नका लागि भए पनी बडिमालिका नगरपालिकाले पोरखे क्षेत्र र कालाजग्रा क्षेत्रको संरक्षण र पर्बद्धनमा बढि लगानी गरेको बडिमालिका नगरपालिका नगरप्रमुख पदम बडुवालले बताए ।
पोरखे लेख बिबादीत बनाउन भन्दा पनी दुबै नगरपालिकाले यसको प्रबद्धन गर्न सके अझै राम्रो हुने नगरप्रमुख बडुवालले बताएका छन् । बुढिनन्दा नगरपालिकाले बिबाद मात्र गरेर हुदैन यसको संरक्षणमा कती लगानी र बढिमालिकाको कती लगानी त्यहाँका जनतालाई प्रत्यक्ष जानेका छन् नगरप्रमुख बडुवालको भनाई रहेको छ । हामीले बढि प्रचार प्रशार र संरक्षण गरेकै कारण मार्तडी क्षेत्रबाट बढि पर्यटक गएको नगरप्रमुखले बडिमालिका खवरलाई बताए।
नेपाल भम्रण बर्ष २०२० को अबसरमा यतिबेला सदरमुकाम मार्तडीबाट पोरखे भ्रमण गर्ने आन्तरिक पर्यटकको घुइचो लाग्ने गरेको छ । तर कोल्टी क्षेत्रबाट बढिमा २ देखी ५ जना मात्र आउने गरेको पाण्डुसैनका ब्यापारीहरुले बताएका छन् ।
स्ववियु निर्वाचन केन्द्रित नेविसंघको उपत्यका स्तरिय छलफल